Bedelka Music inay iPhone ka PC ama iDevices
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Music inay iPhone ka PC ama iDevices
Ma jiraa hab wax ku daro music aad si toos ah u iPod.app toos ah ka iPhone (sida kuwa aad soo bixi Safari) iyada oo loo marayo Lugood?
In badan oo dadka isticmaala iPhone indhaha ', Lugood yahay ciyaaryahanka kaliya ee warbaahinta si ay u maareeyaan iPhone. Sidaas darteed, xitaa waxay ku nici fikradda ah heesahaaga iPhone wareejinta la Lugood, ay weli isticmaalaan Lugood. Si kastaba ha ahaatee, wax is beddeleen. Hadda, iyada oo aan Lugood, waxaad sidoo kale ku wareejin karo files music inay iPhone ka PC ama iPhone / iPad / iPod si fudud. Dhammaan wixii aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay isticmaalaan tababare smart Apple qalab. Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac ) gelineya inaad ma aha oo kaliya in ay u guuraan music ka computer si iPhone, laakiin sidoo kale nuqul ka heeso ka kale iPhone / iPad / iPod in iPhone.
Fiiro gaar ah: The version Mac ma taageeri wareejinta music dhexeeya iPhone, iPad iyo iPod.
Bedelka music inay iPhone ka PC ama iDevices in 2 tallaabooyinka
Download TunesGo iyo raac tutorial soo socda. Waa arrin fudud Tallaabooyinka. Waxaad ka heli kartaa naftaada si dhaqso ah u fahmay.
Fiiro gaar ah: Halkan, aynu isku dayi Wondershare version TunesGo Windows. Sida user Mac ah, waxaad samayn kartaa music ah wareejinta la tallaabooyinka la mid ah.
Step1: Ku rakib TunesGo iyo waxa maamula
First of dhan, rakibi oo ay maamulaan TunesGo on your computer. Connect aad iPhone si aad u computer via cable USB ah. TunesGo si toos ah loo ogaado doonaa iPhone sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku xiran. Markaasay aad iPhone lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala hoose.
Fiiro gaar ah: Si aad u isticmaasho Wondershare Mobile Tag ee macruufka sida caadiga ah, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo Lugood on your computer. Haddii aadan waxa lagu rakibay, ha ka welwelin. Marka ugu horaysa ee aad abuurtaan barnaamijkan, waxaa kuu soo bandhigi doonaa suuqa kala rakibidda Lugood ah. Markaas, rakibi Lugood.
Step2: nidaameed music inay iPhone
Guji "Media" khaanadda tagay. Guji "Music" at line ugu sareeya ee suuqa kala warbaahinta. Markaas, waxaad geli doono suuqa kala music ah. Riix saddexagalka yar "Add"> "Add File" ama "Add Folder" ka PC aad iPhone ka yar.
Ama, haddii aad rabto in aad nuqulka music inay iPhone ka iPad, iPod ama iPhone kale, waa in aad si TunesGo xiriiriyaan iDevices kale waqti isku mid ah. Markaas, in geed buugga iDevice kale, guji "Media"> "Music". In uu furmo suuqa music ah, doortaan files music ka dibna riix saddexagalka hoos "Dhoofinta in". In menu dhibic-upka, ka dooro si aad nuqulka heesahaaga iPhone.
Hadda, aad waxaa lagu sameeyey! Music ayaa loo wareejiyay aad iPhone. Waxaad naftaada ku raaxaysan karaan in music aad iPhone.
Indeed, ka sokow in ay iPhone dayanayaan ka PC iyo iDevices songs, waxaad ku dari kartaa si toos ah iyo koox xiriir iPhone aad on your computer, iyo sidoo kale isku darsamaan xiriirada nuqul la eber khasaaro xogta. Isla mar ahaantaa, waxa aad awoodi kartaa in lagu wareejiyo xiriirada iPhone in Outlook Express , files vCard, Windows Cinwaanka Book, Windows Live Mail iyo Muuqaalka 2003/2007/2010, iyo qeybsanaan.